KU NASO | Himilo Media Group
Lafa-Gur Sharci : Halkan waxa aan ku soo gudbinaya fallanqeyn aan ka sameeyey Qarraarka Maamul ee ka soo baxey Maxkamadda Sare Qaybta Idaariga ee Summadiisu tahey MS/GMS/G-7/523/2019 ee soo baxey 22/10/2019. Qarraarkaas oo la xidhiidhey khilaaf ka dhex taagnaa Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska, iyo Dugsiyada Gaarka loo leeyahey, lana xidhiidhey Xeer Nidaamiye ay Wasaaraddu soo saartey oo tixraaciisu yahay moe/s/01/186/18, ...
Haweenay aroosad aheyd iyo saddex qof oo kale oo ka mid ahaa qoyskeeda ayaa waxa naftoodii gallaaftay sawir ay ku galayeen biyo xidheenka magaciisa la yidhaahdo Bambaro ee ku yaalla goboolka Tamil Nadu ee dalkaasi Hindiya. Sidaana waxa lagu baahiyey wakaallada wararka Faransiiska oo uu Wargeyska Himilo ka soo xigtay, waxaana lagu sheegay in dadkaasi ay goobtaasi u tegeen si ...
Hadalka Culimada laga soo raro (haddii ummad dhaqankeedu tego way tegtay ummadaasi) way ku deysay jiritaan ahaan. haddaan soo koobno. Dadkeenii hore dad dun leh oo qab iyo qadarin Soomaalinnimo madaxa la taagaya. Qur’aanka ummadda la rogaa ka buuxa dhacdooyinkoodii iyo sababtii oo keliya aheyd in Rabbi SWT ay caasiyeen hawadoodana raaceen, Ka dibna dabarkaa looga dhigay dhaabad lagu hakiyo ...
Ciidammada ammaanka ee gobolka Carolina-da waqooyi ee dalkaasi Maraykanka ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen saddex qof oo la sheegay in ay ka mid tahay haweenay gabadh yar oo ay dhashay qoys kaga beddelatay gaadhi qadiima ah. Hooyadan ayaa waxa magaceeda la yidhaa Alice Todd waxa aanay da’deedu tahay 45 jir waxa aanay gabadh yar oo ay dhashay oo ay ...
Waa arrin aad u layaab badan In qof Aadaame ah uu liqo amase calooshiisa loogu tago qalliimaan iyo Beytari iyo sidoo kale biro kale. Bukaakan ayaa waxa uu ku Nool yahay Magaalada Laadiqiya ee Dalkaasi waxaana lagu Sameeyay qaliin calooshiisa lagaga soo saaray alaabtaasi kala duwan, qaliinka aadka u layaabka badan ayaa waxa fuliyey dhakhtar u dhashay Dalkaasi Suuriya oo ...
Dhacdo aad u layaab badan ayaa waxa ay ka dhacday jeel u gaar ah haweenka oo ku yaalla Dalkaasi Britain isla markaana ah jeelka Haweenka u gaarka ah ee ugu weyn Qaarada Yurub. Dhacdadan ayaa waxa ay tahay in mid ka mid aheyd Maxaabiistii jeelkaasi oo ilmo yar ummushay isla markaana aanay dalbanin wax dhakhtar ah nasiib darro ilmihii yaraa ...
Wasaaradda arrimaha gudaha Dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegtay in ay gacanta ku dhigeen niman budhcad ah oo xadi jiray shidaalka ka soo baxa magaalada Xumus ee dalkaasi isla markaana ka ganacsan jiray. Budhcadan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen shaqaalaha ka hawl gala goobta lagu sifeeyo shidaalkaasi waxa aanay la heshiyeen dad degan tuulo u dhaw magaaladaasi si ay ...
Naxariistu waa arrin noole kasta ku abuuran waxaana arrintaasi ina tusaysaa dhacdadan aad u layaabka badan ee ka dhacday dalka Thialand oo ah in shan maroodi ay u geeriyoodeen sidii ay u badbaadin lahaayeen maroodi yar oo dhal ahaa. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday seeraha ku yaalla dalkaasi ee loo yaqaano Khao Yai kadib markii maroodii uu u dhacay ...
Wiil u dhashay Dalka Suuriya kana mid ahaa Qaxoontiga Dalka Suuriya ee ku sugan Dalkaasi Turkiga ayaa qudha iska jaray. Saxaafada Dalkaasi Turkiga ayaa waxa lagu baahiyey in wiilkaasi yar uu ku noolaa Magaalada Kocaeli ee Dalkaasi, wiilkan ayaa sababta uu isku deldelay tahay inuu jidh diiday hab dhaqanka uu kala kulmay macalimiintiisa. Wiilkan ayaa la sheegay in uu ardayda ...